WTTC inozivisa vanokunda 2018 Tourism yeMangwana Tuzo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Awards » WTTC inozivisa vanokunda 2018 Tourism yeMangwana Tuzo
Airlines • nhandare yendege • Argentina Breaking Nhau • Nhau Nhau • Awards • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
WTTC inofara kuzivisa vatungamiriri ve2018 mukushanya kwakasimba pamusangano we2018 Tourism for Tomorrow Awards. Iwo maAward, ayo akaunzwa pachiitiko chakakosha panguva ye18th WTTC Global Summit muBuenos Aires, Argentina, vanopemberera vanokurudzira, vanochinja nyika zvirongwa zvekushanya kubva pasirese pasirese.
Vanokunda ma2018 Awards vanorumbidzwa uye vanozivikanwa pamabhizinesi maitiro epamusoro soro anoenzanisira zvinodiwa nevanhu, nyika nepundutso 'mukati medunhu redu. Vanokunda gore rino vatungamiriri vemaindasitiri vanosimudzira kukura kunosanganisa, uye vanoshandira kune ramangwana rakasvibira semhedzisiro yemipiro yavo yekusimudzira nekusimudzira uye neUN Sustainable Development Goals (SDGs) yeUN.
Iwo 2018 Tourism for Mangwana Makundi anokunda ndeaya:
Nharaunda Mubairo - Global Himalayan Expedition, India
Kwokuenda Mubairo - Thompson Okanagan Tourism Association, British Colombia, Canada
Zvakatipiwa Mubairo - Airport Chiremera Hong Kong, Hong Kong
Innovation Mubairo - Mhandara Atlantic, UK
People Mubayiro - Cayuga Unganidzo yeSustainable Luxury Hotera uye Lodges, Costa Rica
Iwo maAward anotongwa nedare revanozvimiririra nyanzvi, rinotungamirwa naGraham Miller, Executive Dean, Faculty of Arts neSocial Sayenzi kuYunivhesiti yeSurrey. Dzidzo, vatungamiriri vebhizimusi, NGO uye vamiriri vehurumende vese vanobatana kuti vadzikise vanopedzisa vashanu chete Vanokunda. Kuva Tourism yeMangwana mutongi harisi basa rinofanirwa kurerutswa - inoomesera, nhanho-nhatu yekutonga maitiro inosanganisira kuongorora kwakazara kweese mafomu, kuchiteverwa ne-epamhepo kuongororwa kweVapedzisa uye kwavo kuita.
Uyo anokunda chikamu chega chega anotemerwa neanokunda 'sarudzo komiti inotungamirwa naFiona Jeffery OBE, Tourism for Tomorrow Awards Sachigaro, uye inoumbwa na: Sandra Howard Taylor, Mutevedzeri wegurukota rezvekutengeserana, maindasitiri uye Tourism yeColombia; John Spengler, Director weCentre for Health uye iyo Global Nharaunda yeHarvard Chikoro cheRuzhinji Hutano; naDarrell Wade, Co-Muvambi uye CEO weIntrepid Group.
Gloria Guevara Manzo, Mutungamiri & CEO, WTTC, vakataura kuti: “Gore rino makwikwi ekushanyirwa mubairo weHurumende yeMangwana anoratidza kuti kuzvipira kwedu kwakakura zvakadii. Iwo mibairo yakagadzirirwa kuratidza kuti mutambi wese muTravel & Tourism indasitiri ine basa raanofanira kuita mukufambisa chikamu ichi kune ramangwana rine hunyanzvi - kungave kupa dzidziso kuvanhu vanobva kunzvimbo dzakatambura, kuchengetedza nzvimbo dzakatenuka dzemvura kuburikidza neecotourism kana kushanda kwepasirese greenest airport. Ndinovakorokotedza vese nekubudirira kwavo uye nehutungamiriri.
Vanokunda mibairo yegore rino vanoratidzira kwete chete kuti kushanya kunogona kugadzikana, asi kuti kunopa mabhenefiti anooneka kunzvimbo dzenzvimbo, nharaunda dzemunharaunda uye vafambi. "Tinotarisira kuti vanowana mibairo yedu vachakurudzira chikamu cheTravel & Tourism kuti chive chikamu chenyika ino yakagadzikana."
Fiona Jeffery, OBE, Sachigaro, WTTC Tourism yeMangwana Mabairo, yakati: "Basa reTourism yeMangwana Tuzo nderekuratidzira mimwe mienzaniso yakatanhamara yezviitiko zvekushanya zvakaomarara pasi rose uye kukurudzira nekukurudzira indasitiri yedu kuti ive shanduko." tinoda kuona nekuziva. Iwo Tourism for Mangwana 2018 vanopedzisa uye vanokunda mumwe nemumwe anoratidza chiono, hutungamiriri, uye kuzvipira kwenguva refu mukuona kuti indasitiri yedu yakanangana nekugadzira nzvimbo dzakanaka dzekuti vanhu vagare munzvimbo dzakanaka dzevanhu dzinoshanya. "Asi gore rino taona kubatana pamwe nekubvuma kuti matanho anogona kutorwa kuti aongorore zvinokwezva mukushanya zvinova zvinhu zvinokurudzira."
Jeff Rutledge, CEO, AIG Travel, vanotsigira misoro yemibairo, vakati: “Kubva pakushanda nhandare yegirinhi yakasvibirira pasi rose kusvika kutanga paka yekutanga yegungwa muAfrica, gore rino Tourism for Tomorrow finalists iboka rakasiyana revashanduri vanobva kumativi ese epasi. Vakakunda muna 2018 vanoratidza kuti zvisinei nesaizi kana chinangwa, mabhizimusi ese ari muchikamu cheTravel & Tourism anogona kuita kuti kugadzikana kuve chinhu chekutanga uye vova chikamu cherwendo rwedu rwekuenda kune ramangwana rakasviba. ”
Yakazara Rondedzero yevakakunda uye vekupedzisira:
FINALIST - & Beyond, Chamhembe Afrika
MUKUNDI - Thompson Okanagan Tourism Association, Britain Colombia
FINALIST - Rwiziwind Foundation, Jackson Hole, Wyoming, USA
WINNER - Airport Chiremera Hong Kong, Hong Kong
MUKUNDI - Mhandara Atlantic, UK
FINALIST - Parkbus - Yekufambisa Sarudzo, Canada
WINNER - Cayuga Unganidzo ye Sustainable Luxury Hotels uye Lodges, Costa Rica
FINALIST - Heritage Kutarira, Australia
FINALIST - TREE Kubatana, Cambodia